Item No .: MS-S7-Jebinta
Iftiinkan Harley Breakout wuxuu horseed u yahay laydh sare, dogob hoose iyo DRL. Ku habboon 2018-2019 Harley Davidson Kala sooc 107 114, 2020 Harley Davidson Jebinta 114.
Our Harley Davidson Nalalka Hore ee Dillaaca wuxuu la yimaadaa 6000K heerkulka midabka kaas oo ku xidha iftiinka qorraxda dabiiciga ah si loo hagaajiyo hufnaanta aragtida wadista iyo nncrease raaxada wadista. Wanaagsan biyuhu iyo waxqabadka boodhka. Kiis guri oo waara oo leh kuleyl waxqabad oo wanaagsan. Cufnaanta tamarta sare iyo xoojinta iftiinka si loo ballaadhiyo qadka aragtida, loo kordhiyo xaaladaha wadista nabdoon adiga. Iftiinkan Harley Breakout horseedka ahi wuxuu leeyahay isticmaal hooseeya, hufan, keydinta tamarta iyo sifooyinka ilaalinta deegaanka. Awoodda sare ee waqtiga jawaab -celinta/daminta, Nolosha muddada dheer in ka badan 50000 saacadood. Baaskiil iyo ciyaar, rakibid fudud, badiyaa waxay kugu kacaysaa qiyaastii 15 daqiiqo rakibidda. Ku habboon 2018-2019 Harley Davidson Softail Breakout 107 114, 2020 Harley Davidson Softail Breakout 114 ..
faahfaahinta of Harley Davidson Nalalka Hore ee Dillaaca
model Kala sooc 114 107
aragti 182mm/ 7.16 inc
Beam Sare 35W 1272LM
Laydhka Hoose 23W 931LM
Qiimee 12V DC
Faa'iidooyinka Harley Breakout Led Headlight
Wadista Badbaadada: Xawaaraha jawaabta ee nalalka LED-ka ayaa ka dhaqso badan nalalka halogen-ka, waxayna leedahay iftiin aad u sarreeya iyo muuqaal aad u ballaaran, sidaa darteed darawalku wuxuu si xor ah u wadi karaa mugdiga isagoo aan ka werwerayn dhibaatooyinka wadista ee ay sababtay mugdiga mugdiga waddo.
Naqshaddii ugu dambaysay: 7inch dheemanka nalalka dhejiska mootada, Jebinta xadka muuqaalka kore ee nalka mootada LED ee suuqa. Rakibaadda Ugu Fudud, Si Toos Ah U Beddel kullankii nalka hore oo dhan, naqshadeynta muuqaalka shaqsiyeed ， ayaa mootadaada ka dhigaysa mid soo jiidasho leh oo cajiib ah.